संखुवासभा पत्रकार महासंघको छैटौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न – SajhaPana
संखुवासभा पत्रकार महासंघको छैटौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
साझा पाना २०७७ पुस २१ गते ०७:४६ मा प्रकाशित
नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभा शाखाको छैटौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार सदरमुकाम खाँदबारीमा एक कार्यक्रम बीच छैटौं बार्षिक साधारणसभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । उक्त साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्र्दै पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. १ का महासचिव विवेक गौतमले पछिल्लो समय श्रमजिवी पत्रकारहरुको मुद्धा अत्यन्तै पेचिलो बन्र्दै गएको बताए । उनले ठूला संचारमाध्यमहरुले पत्रकारहरुलाई कोभिड १९ कारण तलबभत्ता नदिने र बिना जानकारी कामबाट निकाल्ने लगायतका श्रमशोषण गर्ने गरेकाले श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशामा नै संकट आएको स्पष्ट पारे । ‘कोभिड १९ का कारण कतिपय पत्रकारहरु पेशाबाट बिमुख भएका छन् । त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौ । कामबाट ननिकाल भनिरहेका छौ र आवश्यकता अनुसार समन्वय समेत गरिरहेका छौ ।’—गौतमले भने ।
सबै संचारमाध्यमले बाच्नुपर्छ भनेर नै समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको बारेमा पत्रकार महासंघले कुरा उठाई रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिब्यक्तिको बिषयमा पत्रकार महासंघ डढेर लागि रहेको महासचिव गौतमको भनाइ थियो । पत्रकार समाजको ऐना भएकाले त्यही अनुसार ब्यबहार गर्न अनुरोध गर्दै र समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने जोड दिए ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष विक्रम लुईटेलले पत्रकारहरुले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि निरन्तर लागि रहेको बताए । उनले विधीको शासन स्थापना गर्नका लागि पत्रकारहरु सधैं अग्रपङक्तिमा सद्धैव रहने र रहेको बताए । ‘श्रमजिवी पत्रकारहरुको बिषयमा सिंगो पत्रकार महासंघ लागि रहेको छ । प्रदेश पत्रकार महासंघ सकेसम्म कोभिड १९ कारण संकटमा परेका पत्रकारहरुको सारथी बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । थोर बहुत राहत संकलन गरेर विभिन्न जिल्ला तह सम्म पठाएका छौ ।’—लुइटेलले भने—‘पत्रकारिता पेशामा समस्या नै समस्या छ । तैपनि हामी पत्रकारहरु निरन्तर रुपमा समाचार र सुचना प्रवाह गर्न खटिरहेका छौ । त्यसैले आमसंचारमा काम गर्ने पत्रकारहरु देशको साँचो योद्धा हो । तर पत्रकारहरुले आफैले आफैलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ ।’
पत्रकारले साँच्चिकै पत्रकारिता नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा संखुवासभाका प्रहरी नायव उपरिक्षक नवराज मल्लले बार्षिक साधारणसभा कार्यक्रमले पत्रकारहरुको संस्थागत विकासमा कोशेढुङ्गा सावित होस भन्ने शुभकामना दिए । त्यसैगरि कार्यक्रममा संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले आजको युग भनेको सुचनाको युग भएको बताए । उनले अहिले सुचना नै पावार भएको बताउर्दै जिल्लामा कुनै पनि कार्यालयहरुले सुचनाको हक प्रयोग गरेर सुचना माग गर्दा उपलब्ध नगराएको खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरेर उपलब्ध गराउने अधिकार प्रत्योजन भएकाले आफू सुचनाको हक सम्बन्धि कटिबद्ध रहेको बताउर्दै जस्तो अवस्थामा पनि सुचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । ‘पत्रकारिता मेरो पनि मनपर्ने पेशा हो । यदि म सरकारी जागिर नखाएको भए के बन्थे होला भन्दा पत्रकार नै बन्थे । त्यसैले पनि म प्रेसमैत्री छु ।’—प्रजिअ आचार्यले भने ।
विश्वभर महामारीको संकट र जोखिमको समयमा समेत पत्रकारहरु ज्यानको जोखिम मोलेर निरन्तर रुपमा सुचना प्रवाहमा लागेको देख्दा पत्रकारहरु साँच्चिकै देशको सच्चा नागरिक भएको भन्र्दै प्रजिअ आचार्यले प्रसंसा गरे ।
संखुवासभा जिल्लामा पत्रकारहरुको एकता र कुनैपनि पत्रकारहरु पार्टीकरण नभएको र राजनिती भन्दा पररहेको पाए यो कुरा आफू अत्यन्तै खुशी रहेको प्रजिअ आचार्यको भनाइ थियो ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले पत्रकारहरुले जस्तोसुकै संकट ब्यहोरेर भएपनि पत्रकारिता पेशालाई निरन्तरता दिनु महान रहेको बताए । पत्रकारहरुको छाता संस्थाको रुपमा रहेको पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको तर सम्पूर्ण स्वामित्व भने जिल्ला समन्वय समितिमा नै रहने समेत उनको भनाइ थियो । सुचना केन्द्रको रुपमा होस अथवा पत्रकार महासंघको रुपमा पत्रकारहरुलाई आफनै भवनमा बस्ने ब्यबस्था मिलाउन हाम्रो पनि दायित्व रहेको जिसस प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।
जिसस प्रमुख शाक्यले पत्रकारहरुले विधीको शासन र लोकतन्त्र माथि नै संकट आउने गरि संसद विघटन हुदाँ पत्रकारहरु एकढिक्का भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘महासंघको भवन निर्माणका लागि जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुसंग समन्वय गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा म पनि लागिपर्छु । जिल्लामा पत्रकार महासंघ स्थापना गर्नु हाम्रो समेत दायित्व हो । नेतृत्व को आउँछ भन्नेसंग हाम्रो सरोकार छैन । जो आएपनि नियमित रुपमा प्रक्रिया अनुसार नेतृत्व फेरबदल भईरहन्छ । आज मैले भवन निर्माण गर्न जग्गा दिए भोली आउने जिसस प्रमुखले पनि काटन सक्दैन किनभने पत्रकार नागरिक समाजको रुपमा रहेको संस्था हो ।’—प्रमुख शाक्यले भने ।
त्यसैगरि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले नेपाल पत्रकार महासंघ सधैं लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिब्यक्तिको पक्षमा रहेको बताए । उनले पत्रकारहरु ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमासबैभन्दा पहिले सडकमा उत्रिने संस्था भनेको पत्रकार महासंघ भएको बताउर्दै सरकारले संसद विघटन गरेर विधीको शासन र नियमकानुन कुल्चिने काम गरेको बताए । ‘पत्रकारहरु सधै लोकतन्त्रका लागि कटिबद्ध रहेको छ । पत्रकारहरु नागरिक संगठन हो । त्यसैले पत्रकारहरु विधी र शासन निमोठिने काम भएको अवस्थामा मात्रै एकताबद्ध भएर बोल्ने र अवस्था अनुसार सडकमा समेत उत्रन सक्छ ।’—कोषाध्यक्ष मिश्रले भने ।
आमपत्रकारहरुले आफ्नो बानीब्यबहार र आचरण सुधार गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष मिश्रले जोड दिए । उनले पत्रकारले जे लेखेपनि हुुन्छ, पत्रकार भनेको ठूला मान्छे हुन भन्ने भ्रम नपाल्न समेत सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष नवीन गुरुङले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । भने संस्थाका सचिव अनिश बिष्टले संस्थाको सांगठानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार कृष्णराज शाक्यले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए । भने कार्यक्रम महासंघका अध्यक्ष इन्द्र गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी फागुन ३ गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको एकैसाथ निर्वाचन गरि नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यसैले केन्द्रिय कोषाध्यक्ष मिश्र लगायत प्रदेश महासंघको टोली पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु धनकुटा र भोजपुरको साधारणसभा पछि संखुवासभा आइपुगेको हो । प्रदेश नं. १ भित्र पाँच वटा जिल्ला मोरङ, धनकुटा, भोजपुर, झापा र उदयपुरमा बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ ।